बाँझोपनका कारण सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीका लागि गोलभेँडा वरदान
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » यौन जिज्ञासा र समाधान » बाँझोपनका कारण सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीका लागि गोलभेँडा वरदान
शनिवार १० जेठ, २०७७
काठमाडौं । गोलभेँडामा पाइने लाइकपीन नामक पोषक तत्त्वले पुरुषमा शुक्र कीटको गुण बढाउने एउटा अनुसन्धानले देखाएको छ। प्रत्येक दिन गोलभेँडाको दुई चम्चा गाढा लेदो (प्युरी) सेवन गर्ने स्वस्थ पुरुषमा गुणात्मक रूपमा राम्रो शुक्र कीट बनेको पाइएको छ। सन्तान जन्माउन नसक्ने दम्पतीमध्ये आधाजसोमा पुरुषमा बाँझो पन भएको पाइन्छ।
विज्ञहरूले पुरुषमा हुने बाँझो पनको समस्याबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने औँल्याएका छन्। यूकेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा एनएचएसले बाँझो पनको समस्या भएका पुरुषलाई स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न तथा खुकुलो भित्रीलुगा लगाउन सल्लाह दिने गरेको छ। एनएचएसले गर्भाधानको सम्भावना बढाउन यथासम्भव तनाव घटाउन तथा महिलाको अण्डोत्सर्जनको बेलामा यौ’न सम्पर्क गर्न सुझाव दिएको छ।
तर केही पोषक तत्त्वले पुरुषमा पुंसत्व बढाउने अवधारणा केही समययता प्रबल रूपमा देखिएको छ। पहिलापहिला गरिएका अनुसन्धानहरू भिटामिन ई र जिङ्कको प्रभावमा केन्द्रित थिए। तिनमा जस्तै लाइकपीनमा पनि कोषलाई अक्सिजनबाट हानि पुग्न नदिने एन्टीअक्सिडन्ट गुण हुन्छ। यो तत्त्वले हृदयरोग र केही प्रकारका क्यान्सरको जोखिम घटाउन सघाउने देखिएको छ।
खाद्यपदार्थमा पाइने लाइकपीन सोस्न शरीरलाई गाह्रो हुने भएकाले यो अध्ययनमा सहभागी मानिसलाई अतिरिक्त ल्याक्टोलाइकपीन दिइएको थियो। त्यसरी प्रत्येक पुरुषले उही मात्रामा उक्त तत्त्व पाएका थिए। उही मात्रामा लाइकपीन पाउन प्रत्येक व्यक्तिले पकाएको दुई किलो गोलभेँडा खानुपर्ने हुन्थ्यो।
बाह्र हप्ता चलेको परीक्षणमा ६० जना सहभागी भएका थिए। प्रत्येक पुरुषलाई प्रत्येक दिन १४-१४ मिलिग्राम ल्याक्टोलाइकपीन दिइएको थियो। यो अध्ययन लाइकपीन उत्पादन गर्ने कम्पनीले आंशिक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो।उनीहरूको शुक्र कीट अध्ययनको प्रारम्भमा, छ हप्तामा र अन्तिममा जाँचिएको थियो। शुक्र कीटको परिमाणमा भिन्नता नभए पनि अतिरिक्त लाइकपीन सेवन गरेका व्यक्तिमा स्वस्थ शुक्र कीट र तिनको गतिशीलताको अनुपात बढेको पाइयो।
यूनिभर्सिटी अफ शेफील्डसँग आबद्ध पोषणविद् डा. लिज विलीअम्जको नेतृत्वमा भएको शोध युरोपियन जर्नल अफ न्यूट्रिशनमा प्रकाशित भएको छ। “तत्काल पुरुषलाई हामीले दिन सक्ने सुझाव धेरै कम छ,” उनले भनिन्। “हामी उनीहरूलाई मदिरा सेवन घटाउन र स्वस्थकर खानेकुरा खान भन्छौँ।
तर यी सामान्य सुझाव हुन्।” उनले भनिन्, “यो सानो अध्ययन हो र हामीले यो ठूलाठूला परीक्षण गर्नुपर्छ। तर परिणाम धेरै उत्साहप्रद छ।” उनका अनुसार अब पुंसत्वसम्बन्धी समस्या भएका पुरुषमा यो परीक्षण गरिनुपर्छ। त्यसबाट लाइकपीनले शुक्र कीटको गुण बढाउन तथा जोडीहरूलाई गर्भाधान गर्न तथा बाँझो पनसम्बन्धी महँगो उपचारविधिबाट जोगिन सघाउँछ कि सघाउँदैन त्यो देखाउन सक्नेछ।
स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारिरीक सम्बन्धमा तपाईले कहिलै यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ?
भर्खरै तयार पार्न यो सिप सिक्नुहोस्
म गर्लफ्रेण्डलाई कसरी सन्तुष्ट बनाऊ : मेरो गोप्य अंग सानो छ ठूलो बनाउने उपाय के छ ?
तपाईहरुलेपनि गल्ती त गरिरहनुभएको छैन ? यो समयको शारीरिक सम्बन्ध हो मायाको औषधि
विज्ञका कुरा पढ्नुहोस् : सोचेकै मितिमा बच्चा कसरी जन्माउने, चरम मज्जा कसरी लिने
यस्ता श्रीमानले श्रीमतीलाई कहिल्लै शारीरिक सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् [ कारण र उपायसहित ]
जोडीहरुको मधु मिठासको समयका केही भ्रम र सत्यहरु थाहा पाउनुहोस्
यसरी सम्बन्ध राख्दा बच्चा बस्छ कि बस्दैन् ? [हरेक दम्पतीले जान्नैपर्ने कुरा]
के यौ’न सम्पर्क गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ ? [यस्तो छ अनौठो सत्य]
कोरोना महामारीले कारखाना बन्द हुँदा विश्वभर कण्डम अभाव
मानिसका लागि यौ’न र यौ’निकता आजीवन कायम हुन्छ
भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नको लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा
महिलाहरुले क’ण्डम कसरी प्रयोग गर्छन ? खुल्यो यस्तो रोचक तथ्य
के तपाँईको लिं’गका कारण पार्टनर सन्तुष्ट छैन ? १५ दिनमा ३ इन्च घरमै यसरी बढाउन सकिन्छ
पुरुषहरुका लागि बन्यो यस्तो गर्भनिरोधक सुई एक पटक लगाए १५ वर्ष ढुक्क [भिडियोसहित]
लोक सेवा आयोगले माग्यो ९ सय बढी कर्मचारी, हेर्नुस् कुन-कुन पदमा कति [ विज्ञापनसहित ]